DEG DEG: Kenya oo soo tarxiilaysa Xildhibaano, Wasiiro iyo Shacab Soomaaliyeed maanta & Xariirka labada dal oo gaaray. – Puntlandtimes
NAIROBI(P-TIMES)- Wararka naga soo gaaraya magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa sheegaya in aygoor dhaw kasoo duuli doonto garoonka diyaaradaha ee Joma Kenyata ee Nairobi diyaarad sida Xildhibaano, Wasiir kuxigeen, Senator iyo Shacab Soomaaliyeed oo ay Kenya xalay u diiday in ay galaan gudaha dalkeeda, iyadoo sabab uga dhigtay in ay yihiin dad Soomaaliyeed.
Diyaaraddan oo ah mid gaar ah ayaa wararku sheegayaan in ay ka dhigan tahay meeshii ugu xumeyd ee uu abid gaaro xariirka u dhaxeeya Kenya iyo Soomaaliya, waxaana si weyn baraha bulshada loogu jawaabcelinayaa goodiga dawladda Kenya ay sameysay.
Xildhibaanada iyo Senatarada ku jira dadka lasoo tarxiilayo ayaa la sheegay in ay wateen oo kaliya Baasaboorka Diblumaasiga ah ee ay qaataan madaxda dawladda Faderaalka Soomaaliya, balse ay Kenya iska diiday in ay VISA ama dal kugalkeeda ku dhufato.
Wasiiro iyo Xildhibaano katirsan baarlamaanka Faderaalka ayaa gudaha Airporka xalay ka gudbay, iyagoo lasoo baxay dalalka ay Jinsiyadahooda haystaan oo ay kaga baxeen gudaha garoonka diyaaradaha, waxaana muuqata in ay bahdileen dawladnimada Soomaaliya.
Xildhibaano katirsan baarlamaanka Faderaalka ayaa kusugan gudaha madaarka Muqdisho, si ay u soo dhaweeyeen dadka Soomaaliyeed ee tan iyo shalay ku jiray Airporka Nairobi, si ay ugu muujiyaan in ay garab taagan yihiin go`aanka Geesinimada leh ee ay qaateen.
Gudoomiyaha guddiga Kheyraadka ee Aqalka Sare Soomaaliya Senator Ilyaas oo ka mid ah dadka lasoo tarxiilayo ayaa la filayaa in uu wariyaasha kulahadlo gudaha garoonka diyaaradaha, waxana muuqata in fashilkii ugu xumaa ay Kenya qaadatay.
Dawladda Faderaalka ayaa kaga sugayaa jawaabta ku haboon ee Kenya, ilaa haddana ma jirto wax go`aan ah oo ka soo baxay dawladda Faderaalka ee Soomaaliya, marka laga reebo warar sheegaya in Diyaaradaha Qaadka la joojin doono, inkasta oo uusan aheyn war ilaa hadda si toos ah uga yimi dawladda Soomaalida.
Kenya siyaasada ay ciyarayso adan ula dhacay. Uhuru xal aan taa ahayn oo uu kursiga kusii hayn karo male.
Kuwa lasoo baxay baasaborada shisheye waa fulay yaal khaaimiin qaran ah. Waa in laga xayuubiyo masuiliyada ay ku magacaaban yihiin
dadka basapot shasheeyah laso baxay waxay bahdilaad kutahay dalkoda sidqqsi dardeed waa in talaabo laga qaado